Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-piasana any Reellarnation of William Wells Brown Michael Bernard Beckwith avy ao amin'ny Foibe Ara-panahy ara-panahy Agape Iraisam-pirenena - Fikarohana momba ny Reynkarnation
Ny fiainam-pivavahana taloha nataon'i Michael Beckwith tamin'ny naha-Abolitionista an'i Boston azy
Tao anatin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson dia nanontany an'i Ahtun Re aho nandritra ny fiainany taloha Michael Beckwith, ny mpitarika ny Foiben'ny Foiben'ny Ara-panahy any Los Angeles. Ahtun Re dia nilaza tamiko fa i Beckwith Reverend dia mpanavakavaka fanta-daza tamin'ny taonjato faha 19th Boston. Noho izany dia nanolotra boky momba ny famonoan-tena ao Boston aho ary nahita izany William Wells Brown Mifanitsy amin'i Michael Bernard Beckwith. Mariho koa fa samy mampiasa anarana telo ny roa. Nandritra ny fivoriana nanaraka an'i Kevin, Ahtun Re dia nanamafy fa i Michael Beckwith dia i William Wells Brown tamin'ny vanim-potoana vao niova.
Tari-dalana ara-panahy amin'ny alalan'ny fangirifiriana
Misaotra an'i Reverend Beckwith aho noho izy nandray andraikitra manan-danja tao amin'ny tantaram-piainako taloha. Tamin'ny volana Ôktôbra 2000 dia nanatrika fihaonambe iray tany Palm Springs aho izay nanamarika an'i Beckwith lohateny. Rehefa nandao ny fivoriana hariva aho, dia niaina trangam-pahanginana mahery vaika toy ny mbola tsy tsapako talohan'izay, izay mbola tsy dia mahazatra loatra raha nanan-kerinandro aho nandritra ny roa na telo ora monja mialoha. Nahatsapa aho fa mila mahazo zavatra iray hohanina na raha mandalo fotsiny, dia nandeha tany amin'ny trano fisakafoanana ivelan'ny toeram-ponenana izay nitazonana ny fihaonambe. Niaraka tamin'ny synchronistic aho dia nihazakazaka tao amin'ny Reverend Beckwith sy ny fofombadiny Rickie Byars tao amin'io trano fisakafoanana io.
Nasehoko ny sary nataon 'i Reverend Beckwith sy Rickie Byars ho an' ny raharaham-pinoana vaovao momba ny fanambadiana ao amin 'ny firaisam-pinoana izay ahitana ny Bill Clinton, Al Gore, George W. Bush ary ny tenako. Nianatra tao amin'ny fihaonambe aho fa ny Reverend Beckwith dia hihaona amin'i Bill Clinton, izay filohan'i Etazonia tamin'izany fotoana izany, tao anatin'ny roa andro tao amin'ny Trano Fotsy.
Reverend Beckwith dia nanolotra ny sary taloha nataon'i Bill Clinton ho an'ny trano fotsy
Tao amin'ny trano fisakafoanana, nanontaniako ny Reverend Beckwith raha toa izy hanafaka ny sary vetaveta ao amin'ny vatana vaovao any amin'ny Filoha Clinton, izay nataony. Vantany vao nahatsapa aho fa ny Reverend Beckwith dia nanolotra ny fonosana ho an'ny Filoha Clinton tamin'ny 30 tamin'ny Oktobra, izay fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i John Adams.
Hitako io fisehoan-javatra io hanehoana ny fandraisana anjaran'ny fanahy, izay nitondrana ahy nankany amin'ny fihaonambe, izay tsy fantatro mialoha, dia notarihin'ny fijaliana mafy hanoanana mba hiditra ao amin'ny Reverend Beckwith ao amin'ny trano fisakafoanana, ary avy eo i Reverend Beckwith dia nanatitra fonosana iray ho an'i Bill Clinton tao amin'ny White House, izay nahitana ny raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao hafa an'i Bill Clinton, tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i John Adams.
Ity hetsika ity dia nofaritana tamin'ny antsipiriany bebe kokoa, miaraka amin'ny fisehoan-javatra hafa mitovy amin'izany, ao amin'ny bokiko, Fiverenan'ny revolisionera.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Misy fitoviana miavaka eo amin'i William Wells Brown sy Michael Bernard Beckwith.
Ny fiainana taloha talenta: Wells dia mpanolotsaina sady mpanoratra. Ny fanomezam-boninahitra an'i Beckwith koa dia mpanentana manana fanomezam-pahasoavana, ary koa mpanoratra. Ny fitarihana dia naseho nandritra ny androm-piainany.
Ny Fanahy Mitarikat: Mino aho fa ny fanateran'ny Reverend Beckwith ny fonosana teraka tao amin'ny vatana vaovao indray tamin'i Bill Clinton tao amin'ny White House tamin'ny andro nahaterahan'i John Adams dia notarihin'ny fitarihan'ny fanahy. Tsy ho vitako samirery ny nandamina an'io fihodinana toe-javatra io.